Windows 8/10 တွင် ပါသော ယူနီကုဒ်စနစ်သုံးမြန်မာစာကို ထည့်သွင်းနည်း – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
Windows 8/10 တွင် ပါသော ယူနီကုဒ်စနစ်သုံးမြန်မာစာကို ထည့်သွင်းနည်း
Posted on March 13, 2019 September 20, 2019 Authorthixpin
ယူနီကုဒ်စနစ်ကို လိုက်နာသောမြန်မာစာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အားသာချက်များရှိပါသည်။
မြန်မာစာကို စီစဉ်တကျထားနိုင်သည် ဆိုလိုသည်မှာ အဂ်လိပ်စာတွင် A to Z သို့ Z to A စီနိုင်သကဲသို့ စီနိုင်သည်။
ထို့အပြင် ကမ္ဘာကျော် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများသည်လည်း စံ စနစ်ကိုလိုက်နာသည့် ဘာသာစကား စာပေများကိုသာ သူတို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်ထည့်သွင်းထားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် (ေ) ဘေးရှိ အဝိုင်းစက်များထားရှိခြင်းအားဖြင့် တစ်ချောင်းငင် (ု, ူ, ်,့,ံ,ျ,ှ) စသည်များမှာ၂ခါရိုက်မိလျှင် အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်သည်။
မြန်မာစာသင်ပုန်ကြီးအတိုင်း ရိုက်ရသည် ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် အလွယ်တူ တက်လွယ်သည်။
အမြှောက်၊ အညွှန်း စသည်တို့ကို စာလုံးထပ်ခြင်းမရှိပါ။
ပါဋ္ဌိ ပါဋ္ဌ်ဆင့် စာပေများကို အလွန်လွယ်ကူစွာရိုက်နိုင်သည်။ (ဥပမာ မန္တလေး၊ မဏ္ဍပ်၊ ဥက္ကဌ)
မြန်မာ အက္ခရာများ၏စာလုံးများသည် အခြားသော ဘာသာစာလုံးများ၏ နေရာများကို ယူပြီးသုံးစွဲထားခြင်းမရှိပါ။
စာလုံးပုံစံ အမျိုးမျိုး ရှိခြင်း။( ဥပမာ Padauk, Thelon, Myanmar3, Master Pieace, Parabike စသည်အားဖြင့်)
စာလုံး တစ်လုံးကို တစ်မျိုးသာမှတ်သားရခြင်း
စာလုံးများတွဲဖက်လိုက်ပါက ထပ်သွားခြင်း၊ အခြားပုံစံဖြင့် တူညီနေမှုမရှိခြင်း (ဥပမာ ငှက်၊ အမြှောက်၊ အညွှန်း )
စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ မှားယွင်းစွာရိုက်ပါက ရိုက်၍မရခြင်း (ဥပမာ ဦး ကို (ဉ) ညလေး ဖြင့် ပေါင်း၍မရပါ။ (ဉ်) ညလေးသတ်ကိုလည်း ဥ ဖြင့် ပေါင်းလို့မရပါ )
Myanmar(Phonetic order) ကီးဘုဒ်
တချို့စကားလုံးများအတွက် မြန်မာစာရေးထုံးကို မလိုက်နာနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ – (မောင်) ဟုရိုက်လိုပါက (မ) ကိုအရင်ရေး၍ သဝေထိုး (ေ) ကိုနောက်မှရေးမှ အမှန်ပေါ်သည်။ တခြားစကားလုံးများအတွက်တော့ အတော်ကိုအဆင်ပြေပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရသည်မှာ Unicode စံကို လိုက်နာထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် ယူနီကုဒ်တွင်မဆို ဗျည်းအက္ခရာပြီးမှ သရ လိုက်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
ရေးထုံးလိုက်နာသော Myanmar (Visual order) မြန်မာစာ ( လက်နှိပ်စက် ) အားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
Originally written by Thixpin.
Major revision and updated to conform with Windows 10 Pro, Version 10.0.17763 – September-20-2019 by Winston.
← Previous Previous post: Unicode Font Profiles for iOS
Next → Next post: Windows တွင် ဇော်ဂျီဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ် ဖြုတ်နည်း